အခမဲ့အပြန်အလှန်ရထားဂိမ်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အခမဲ့အပြန်အလှန်ရထားဂိမ်း
ဂိမ်းရထား – Interactive မှဂိမ်းလေ့ကျင့် – အခမဲ့ရထားဂိမ်း – ရထား Simulator – အပြန်အလှန်ရထား
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရထားလမ်းများအတွင်းသို့ ဝင်၍ ဤထူးခြားသောရထားများ Simulator ဂိမ်းကိုခံစားပါ, စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတိုင်းရထားအသစ်တစ်ခုကဘူတာကနေထွက်လာပြီးသင်ဟာနံပါတ်တွေကိုရွေ့လျားနေတဲ့ရထားဆီကိုရောက်အောင်ပြင်ရမယ်, ဒါကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာရနိုင်သည် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်.
ဒါတွေဟာတချို့စည်းမျဉ်းတွေပါ, လမ်းညွှန်ချက်များ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့များအတွက် features ဂိမ်းလေ့ကျင့်:
ကိုနှိပ်ပါ ကစားသည် မီးရထားဂိမ်း၏ဘယ်ဘက်ထိပ်ပေါ်မှာ.
ပြီးရင် scroll and click လုပ်ပါ စတင်ပါ ဂိမ်းမျက်နှာပြင်အလယ်၌တည်၏.
အဆိုပါ ရထားလမ်း ဒီဂိမ်းထဲမှာရထား၏၎င်း၏ ဦး တည်ရာကိုသွားခွင့်ပြုမယ့်လမ်းအတွက် fixed ခံရဖို့ရှိသည်.
သင်ဤ Interactive ရထားဂိမ်းအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ရှိလျှင်, သငျသညျအပြုသဘောမှတ်ရပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရထားသည်ရထား Simulator ထဲမှမမှန်သည့်နေရာသို့ရောက်လျှင်, မင်းကအနုတ်လက္ခဏာတွေရလိမ့်မယ်.
သင် Train အပြန်အလှန်ဂိမ်းထဲမှာသစ်ပင်များကိုလျစ်လျူရှုနိုင်ပါတယ်, သူတို့ကဂိမ်းမြင်ကွင်းကိုပိုပြီးပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲ, သူတို့သည်သင့်အတွက်မည်သည့်ရမှတ်ကိုမျှမထုတ်လုပ်ပါ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထား Simulator ဂိမ်းကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်, သင်ကငါတို့ကိုထောက်ပံ့လိမ့်မယ်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ရထား Simulator အဓိကမျက်နှာပြင်
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရထားဂိမ်း၏အဓိကစာမျက်နှာ၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် preview ကိုဖြစ်ပါတယ် (အမှန်တကယ်ဂိမ်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်), ယနေ့ရထားလမ်းသူဌေးဖြစ်စတင်ပါ.
ရထားဂိမ်းကစားရန်အတွက်သင်ကလစ်နှိပ်ပါ Play ထိပ်ဘယ်ဘက်ပေါ်မှာ, ပြီးတော့ စတင် မျက်နှာပြင်အလယ်၌
ဤရွေ့ကားသင်တွေ့နိုင်ပါသည်အဓိကရထားလမ်းကြောင်းအချို့ကိုဖြစ်ကြသည် saveatrain.com က်ဘ်ဆိုက်.
Save A Train သည်ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းနေရာယူထားပြီးကုမ္ပဏီအမြတ်အစွန်းမရောက်မှီခရီးသွားများကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်, ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြားပိုမိုကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးကိုဖန်တီးပေးပြီးရေရှည်တွင် Save A Train ကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်, ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်အတွက်ပျော်စရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်အမြဲကြိုးစားသည်, ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ရထားဂိမ်းအခမဲ့ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်သင်ကအခြားဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ရထားဂိမ်းအက်ပလီကေးရှင်းအတွက်ငွေမပေးရဘူး၊ ? ?.
ငါတို့ရဲ့ Superb Free Train Game အကြောင်းကိုခင်ဗျားသိပြီ, အကြှနျုပျတို့သညျလညျးထိုအကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေစျေးနှုန်းများရဖို့သိသင့်ယုံကြည်ပါတယ် – သင့်ရထားလက်မှတ်ကိုမှာထားသင့်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-game%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)